अहिलेसम्म अस्थायी गर्भ निराेधका लागि पुरुषहरुले कण्डमको प्रयोग र स्थायीको लागि बन्ध्याकरण नै गर्दै आएका छन् । तर अब महिलाको जसरी पुरुषहरुले पनि गर्भ निरोधक चक्की खाएर गर्भ निराेध गर्न सक्नेछन् । हो वैज्ञानिकहरुले पुरुषले पनि गर्भ निरोध गर्न सक्ने ट्याबलेटको विकास गरिसकेको दावी गरेका छन् । जुन पुरुषहरुको.....
महिलाहरू महिनावारी हुँदा धेरै खर्च हुने देशको सूचीमा नेपाल पाकिस्तानपछि दोस्रो स्थानमा रहेको बीबीसीले गरेको एउटा विश्लेषणमा देखिएको छ। त्यो विश्लेषणका लागि एशियाका विभिन्न १८ देशबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो। औसतमा नेपाली महिलाहरूले आफ्नो मासिक आयको तीन प्रतिशत रकम महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने.....
मेवा कुन कुन रोगको लागि उपयुक्त हुन्छ? हेर्नुहोस मेवाको १५ फाईदा
मेवा देख्न र खानमा जति मीठो हुन्छ त्यत्तिकै गुणकारी पनि हुन्छ। विज्ञहरुका अनुसार मेवाको केवल फल मात्र होइन पूरै रुख नै औषधिय गुणले युक्त हुन्छ । मेवामा भिटामिन ए अन्य फलमा भन्दा उच्च पाइन्छ । मेवामा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, भिटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट तथा फाइबर पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । थोरै.....
सरकारी डाक्टरहरुले बुधबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारी चिकित्सकको समायोजनको विषयमा आफूहरुको माग पूरा नगरेको भन्दै उनीहरुले आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिस्कार गर्ने बताएका हुन् । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले आइतबार सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै माग पूरा नभए.....
रुकुम -रुकुम पुर्वकोे एक विद्यालयका विद्यार्थीहरु एकै पटक बिरामी परेका छन् । जिल्लाको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–६ मयाङको जनजागृत आधारभूत स्कुलका ३७ जना विद्यार्थी एकैपटक बिरामी परेका हुन् । आईतबार बिहान विद्यालयमा प्राथना गरिरहेका विद्यार्थीमा एक्कासि टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, रिङ्गटा लाग्ने,.....
काठमाडाै - यौन, प्रजननलगायत स्वास्थ्य चेतना र जाँचका लागि सरकारले विद्यालयहरूमै नर्स खटाउन सुरु गरेको छ । ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘पाइलटिङ प्रोजेक्ट’का रूपमा तत्काल प्रदेश ३ का २० विद्यालयमा नर्स खटाएको हो । बालबालिका घरबाहेक बढी समय विद्यालयमा.....
१. तपाईंलाइ कहिलेकाही यस्तो अनुभव भएको छ? तपाईं निदाइरहेको भएको छ तर वरिपरी के भैरहेको छ सबै निद्रामै सुन्न सक्नुहुन्छ?२. के तपाईंलाइ यस्तो महसुस भएको छ की तपाईं निद्रामा हुनुहुन्छ र तपाईंलाइ सासै फेर्न गाह्रो हुनेगरी कसैले दबाइरहेको छ ? ३. के तपाईंलाई निद्रामा यस्तो लागेको छ की तपाईंले सबै कुरा देख्न सुन्न.....
स्वास्थ्य सहायकका लागि लोकसेवामा मलाई सोधिएको अर्को प्रश्न थियोः डाक्टर श्रीमान् पाए जागिर हाप्नु हुन्छ ? किन ?बिहान करिब पाँच बजेतिर नै धरान बजारको भानुचोक बस स्ट्याण्डमा दश–बाह्र जना भेला भयौं। हामी सबै स्वास्थ्य परिचारिका सहायक पाँचौं तहका लागि लोकसेवाको लिखित परिक्षामा नाम निकालेर मौखिक परिक्षाका.....
स्वास्थ सेवा बन्दले बिरामी मर्कामा, डा.केसीले अनशन तोडे, यस्तो छ बिज्ञप्ति
काठमाडौ-डा. गोविन्द केसीसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै चिकित्सकहरूले हिजो आकस्मिकबाहेक अन्य स्वास्थ्यसेवाहरू बन्द गरेका थिए । हिजो लगायत पटक पटक भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको हडतालले बिरामीहरूलाई अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित गरेको भनेर आलोचना भएको थियो । यस्तो अबस्थाले बिरामीहरु चपेटामा परेका छन । बिरामी हुनुको.....
कतै घुर्ने समस्या त छैन, यस्ता छन् घुर्ने व्यक्तिहरुले जान्नैपर्ने कुराहरु
ज्ञान बाँड्नु सबैभन्दा ठूलो धर्म हो त्यसैले यहाँ लेखिएको जानकारी यदि हजुर अरुकोलागि पनि उपयुक्त हुने ठान्नुहुन्छ भने यो सूचना लाई लाइक तथा शेयर गरी अरुलाई पनि स्वास्थ हुन सहयोग गर्नुहोस। के तपाई राति सुत्दा घुर्नुहुन्छ ? यो तपाईभन्दा पनि छेउमा हुने साथी, भाइ आफन्तलाई राम्ररी थाहा हुन्छ ।घुराइले घुर्ने.....